‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’बाट हटिन् दिपाश्री, सदाबहार नायिका करिश्माकाे भयो इन्ट्री! – KhabarTime
यी हुन् प्रहरीको ह त्या’मा संलग्न ७ जना आरोपी, प्रहरीले गर्यो सार्वजनिक
काठमाडौं उपत्यकाका थप १७०२ जनामा संक्रमण पुष्टि
नेपालमा थपिए ३०९३ कोरोना संक्रमित, थप ८ जनाको मृत्यु
‘सरकारले आ’तंक फैलायो’ भन्दै माधव नेपालले निकाले यस्तो विज्ञप्ति
अनौठो तरिकाले नेपालको प्रचार गर्ने महिला पहिलोपटक मिडियामा, भन्छिन् “म नेपाली हो”
इन्दु दादीको निधनले शोकमा बलिउड, टिभी स्टारहरूकाे आँखामा भरियो आँशु!
अति नै मार्मिक कथा मन थामेर नरोई पढ्नुहोला ! शेयर गरेर अरुलाई पनि पढ्ने मौका दिनुहोला
‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’बाट हटिन् दिपाश्री, सदाबहार नायिका करिश्माकाे भयो इन्ट्री!
काठमाडौं । नेपालको चर्चित टिभी कार्यक्रम मुन्द्रेको कमेडी क्लबबाट दिपाश्री निरौलालाई हटाईएको छ । दिपाश्रीको स्थानमा अर्की नायीका करिश्मा मानन्धरलाई राखिएको छ । प्रोडक्सन कम्पनीले त्यसका बारेमा औपचारीक जानकारी भने गराएको छैन ।
कार्यक्रममा अतिथी बनेर गएकी एलिजा गौतमले अबको कार्यक्रममा चर्चित नायिका करिश्मा मानन्धरलाई राख्ने जानकारी सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिएकी छन् । उनी कार्यक्रममा अतिथिका रुपमा पुगेकी थिइन् । सो भाग प्रसारण हुन भने बाकी नै छ । अब प्रसारण हुने एपिसोडमा दिपाश्रीको ठाउँमा दर्शकले करिश्मालाई देख्नेछन् । एलिजाले सार्वजनिक गरेको तस्बिरमा दिपाको स्थानमा करिश्मालाई देख्न सकिन्छ ।
केही समय अघि दिपाश्रीले राजेश हमाल महानायक होईन भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विवादमा तानिएकी थिईन् । सो अभिब्यक्ति पछि उत्पन्न परिस्थितीले दिपाश्रीलाई आलोचित बनाएको छ । उनले माफी समेत मागिसकेकी छन् । मुन्द्रेको कमेडी क्लब कार्यक्रमका प्रायोजक कम्पनीको दबाबमा नै दिपाश्रीलाई हटाईएको स्रोतको दाबी छ ।
दिपाश्रीले कार्यक्रमको सुरुवात देखि नै अध्यक्षता ग्रहण गर्दै आएकी थिईन् । अबको कार्यक्रममा भने अध्यक्षतामा करिश्मालाई देख्न पाईने भएको एलिजाले सार्वजनिक गरिदिएकी छन् । मुन्द्रेको कमेडी क्लब चर्चित कलाकार जीतु नेपालको रियालटी कमेडी शो हो । कोरोना कहरका कारण उक्त सो लामो समय स्थगित् गरिएको थियो । कार्यक्रमको छायाँकन भएपश्चात् नायिका गौतमले एक तस्विर सार्वजनिक गर्दै छिट्टै आउँदै भन्ने जनाएकी छिन् ।
भर्खरै बुटवलमा प्रहरीद्वारा फा’यर, के भएकाे यस्तो!